ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ရန်ကုန်မြို့က ကလေးဈေးသည်များ (ရုပ်သံ)
ရန်ကုန်မြို့က ကလေးဈေးသည်များ (ရုပ်သံ)
ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအသစ်တည်မှာ ကို သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာ ၊
မြန်မာပြည် အနယ်နယ် က ကလေး လုပ်သားတွေနဲ.
ခိုကိုးရာမဲ. သက်ကြီးရွယ်အို များကိုလည်း ...........
... အမြန် ကယ်တင်နိုင်ပါစေ ။ ။ ။